Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Haweenka Ogadenya ee Perth iyo Hogaanka Jaaliyadda oo kulan muhiim ah isugu yimid
Ururka Haweenka Ogadenya ee Perth iyo Hogaanka Jaaliyadda oo kulan muhiim ah isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ October 3, 2012
Waxaa kulan heersare ah isugu yimid hogaanka Jaaliyadda S.Ogaadeenya iyo Ururka Haweenka Ogaadeenya ee kadhisan magaladPerth, dalkaAustralia. Shirkan oo dhacay xalay fiidnimadii ayaa waxaa kasoo qaybgalay dhamaanba xubnaha ururka haweenka iyo taageerayaashooda halka dhanka jaaliyadda uu hormuud ka ahaa Hogaamiyaha jaaliyadda Mudane Adan Dakhare. Sidoo kale waxaa madasha marti sharaf ku ahaa Afhayeenka Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya Mudane Cabdiqadir Xassan Hirmooge (Cadaani). Shirkan ayaa ula jeedadiisu ahayd mid isugu jira warbixin, kala warqaadasho iyo wada tashi guud oo lagaga wada tashanayo geedi socodka halganka gobanimo doonka shacabka S.Ogaadeenya.
Waxaa lagu furay ayaado qur’aan ah iyo wacdi diini ah kaasoo hadiyo jeer lagu furto shirarka iyo kulamada xubnaha jaaliyaduhu qabsadaan. Ka dib waxaa lagu soo dhaweeyay Sheekh Cabdiqaadir Cali Guray oo halkaas kasoo jeediyay wacdi diini ah. Wuxuu ka hadlay oo kale sheekhu cabsidda Alle iyo xasuusta Alle in wax walba ka waynyihiin dhamaanna nalooga baahanyahay Alle kacabsi meel kaste iyo waqti kaste. Wuxuu kaloo ka hadlay sheekhu siiradda Nabiga CS iyo qaab dhaqanka suuban ee Nabi Maxamed (SCW) uu oola dhaqmi jiray dhamaanba bulshada gaar ahaan dumarka iyo xaasaskiisii. Wacdi dheer oo xiiso badnaa ayuu sheekhu ku soo gunaanuday waddan jacaylku inuu kamid yahay iimaanka qofka, dhamaanteena nalooga bahanyahay inaanu jeclaano dadkeena , dhulkeena, diinteena iyo jiritaanka qadiyaddeena kusalaysan Islaamnimadda.
Intaas kadib, waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha Jaaliyadda Mudane Adan Dakhare oo u mahad celiyay ururka haweenka sida wanaagsan ay ooga soo qayb galeen shirka. Wuxuu ka warbixiyay gudoomiyuhu waxqabadka jaaliyadda dhawrkii bilood ee oogu danbaysay asaga oo sheegay inay shirar badan iyo abaabul baaxad balaadhan soo qabteen mudadaas yar. Waxaa kamid ahaa wax qabadka carabka uu kudhuftay; in lala kulmay xafiisyo kala gadisan oo dhanka dawladda ah, in qadiyadda la gaarsiiyeen jaamacadaha iyo qaar kamid ah ururada bulshada ee kadhisan Perth, in shirar iyo kulamo laqaateen qoomiyaddaha qaarkood iyo mudaharaad balaadhan oo lagu so bandhigayay tacadiyadda kajira Ogaadeenya.
Mudane Dakhare wuxuu sidoo kale la qaybsaday ururka haweenka waxqabadka jaaliyaddu soo wado mustaqbalka dhaw kana codsaday xubnihii kasoo qaybgalay shirkaas inay kaqayb qaataan hawlaha jaaliyadda sidii hadiyo jeer ay ooga qaybqaadan jireen hada kahorba.
Waxaa warbixintii jaaliyadda ka dib lagu soo dhaweeyay madasha afhayeenka JWXO Mudane Cadaani oo asagu warbixin dheer oo meelo badan taabanaysa kasoo jeediyay madasha. Mudane Cadaani wuxuu si waafi ah ooga hadlay arimo ay kujiraan xaaladda Ogaadeenya ay maanta kujirto kuna tilmaamay in dayr curasho fiican leh ay kabilaabatay qaar kamid ah gobalada Ogaadeenya sida Doollo, Qoraxay, Jarar iyo Nogob. Dhanka nolosha shacbigu wuxuu ku tilmaamay inuu jiro dhibkii jiri jiray iyo sicir barar maciishadu qaali tahay. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu xasuuqa shacabku wili socdo kii oogu danbeeyayna kadhacay qoriile iyo galaalshe. Dhanka dawladda Itoobiya wuxuu sheegay in ay galeen marxalado cusub taniyo inta uu dhintay KT Males Zenawi kuwaas oo ah; kow labadii bilood ee oogu danbeeyay dhaqaalihii Itoobiya inuu sii xumaanayay labo, EPRDF inay iswada haysato Tigreeguna maanta uu qiimo dhacay qoomiyadihii kacabsan jirayna ay katagtay cabsidii sadex, in shucuubtii Islaamka ee Itoobiya ilaayo Hadda mudaharadkii wili wadaan afar, in laga dareemayo gudaha ciidanka Itoobiya niyad jab baladhan iyo goosasho lixaad leh.
Afhayeenku mar uu kawarbixinayay xaaladda Ogaadeenya ayuu sheegay maamul kusheega kilalku inuu kala baxsasho kujiro isla mar ahaantaana ay socoto is eedeen kadib markii soo if baxay cajalado soo bandhigaya sharci daraddi lagu qabtay warayiyaashii Swedishka ahaa iyo wiliba cajaladihii hawaarintu ooga hadlayeen gabood faladda ay gaystaan. Wuxuu sheegay ayana inay jiraan hawaarin tiro badan oo isu soo dhiibay CWXO iyo kuwa kaloo tahriib ooga baxa dalka.
Mudane Cadaani Hirmooge wuxuu si qoto dheer leh ooga hadlay oo kale, wada hadalka u bilawday JWXO iyo dawladda Itoobiya oo uu ku sheegay wadahadalkaasi inuu yahay jid loo marayo madax bannaanida Ogaadeenya maadaama astaanta JWXO aytahay qalin & qori. Wadahadalka labada dhinacna dib la iskugu soo laaban doono isla mar ahaantaan shacabka Ogaadeenya la war galin doono hadiyo jeer marxaladda uu marayo wadahadlku.
Isku soo wada duduuboo, warbixinta masuulka JWXO kadib ayaa waxaa su’aalo iyo talo bixin soo jeediyay marwooyinkii katirsanaa ururka haweenka ee jaaliyadda. Marwooyinka ayaad moodaysay in talooyinkoodu ubadnaayeen dhanka arinta wada hadalka dhaxmaraya JWXO iyo dawladda gumaysiga ee Itoobiya, ayagoo dhmaantoodba hal dhabo qaaday kunasheegay in ay taagan yihiin Xornimo ama Geeri, diyaarna oola yihiin halaganka gobanimo doonka ah “hiil iyo hooba” balse aysan jirin wax udhaxeen kara socdaalka halganka iyo helidda xornimada Ogadeenya.